अब कार्ड बिना नै एटिएमबाट पैसा निकाल्न पाइने - Gandak News
अब कार्ड बिना नै एटिएमबाट पैसा निकाल्न पाइने
गण्डक न्यूज द्वारा १३ बैशाख २०७६, शुक्रबार ०८:४२ मा प्रकाशित
सिभिल बैंकसँगको सहकार्यमा हाम्रो टेक्नोलोजी प्रालिले ‘कार्डरहित एटिएम भुक्तानी’ सेवा प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । एम बैंक’ एपमार्फत कम्पनीले यो सेवा ल्याउन लागेको हो । हाल बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी गरी २ सयभन्दा बढीले ‘एम बैंक’ एप प्रयोग गर्दै आएका छन्।
आफ्नो खाता भएको संस्थाले प्रयोग गर्ने ‘एम बैंक’ एपको माध्यमबाटै ग्राहकले सिभिल बैंकको नेपालभर रहेका ६८ एटिएमबाट कार्डबिना रकम झिक्ने सुबिधा पाउने छन्।
कम्पनीको अनुसार यो प्रविधि सफल रुपमा परीक्षण भइसकेको छ । कम्पनीको अनुसार कार्डबिना एटिएमबाट पैसा निकाल्न सकिनेगरी सबै प्राविधिक काम सकिएको छ ।
अब एटिएम नै सञ्चालन नगरेका विकास बैंक, फाइनान्स तथा सहकारीका ग्राहकले समेत यो लाभ पाउने छन्। एटिएम सञ्चालन नगरेका विकास बैंक, फाइनान्स र सहकारी संस्थाहरु यो प्रविधिमा जोडिएर ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन्।
पोखराको लामाचौरमा तिजे महोत्सवको तयारी तीब्र, राष्ट्रिय महिला भलिबलको निरन्तरता
गण्डकी प्रदेशमा ५ वर्षमा ३५ सय किलोमिटर कालोपत्रे !
कोठामा लगेर सामूहिक करणी आरोपमा दुई पक्राउ
पोखराको लामाचौरमा तिजे महोत्सवको तयारी तीब्र, राष्ट्रिय…
अघिल्लो	अर्को 1 of 1,367
भाइरल साम्राज्ञी ! ‘विकिनी’ विथ…
कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी कार्कीले जब आफ्नै हातमा…
लक्ष्मीलाई मार्न १० लाख खर्चने श्रीमान् रमेश सहित…
पृथ्वीचोकमा ट्राफिक कुट्ने ४ जना बैदाम प्रहरी…
स्कुलमा भएको मनिटरको चुनाव हारेपछि विद्यार्थीले…
पोखरामा भारतीय गाडीमा दुध, तनहुँमा दुर्घटना